၂၀၁၃ ပြီလ NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဧပြီလ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဧပြီလ 2018
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီ: Comcast တည်နေရာ: Denver CO အမေရိကန် Comcast ရဲ့ TPX (Technology.Product.Xperience) အဖွဲ့အစည်းကမီဒီယာနဲ့နည်းပညာ၏လမ်းဆုံမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်အသင်းများကိုအစဉ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအသွင်ပြောင်းကြောင်းထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်နေကြသည်။ အဆိုပါ X1 platform ပေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဟောပြောချက်လမ်းညွှန်အဖြစ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များမှ TVGo တူသော apps များဖန်တီးခြင်းမှကျနော်တို့လုပ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ် ...
Lynx Technik အရောင်းရေးအဖွဲ့အပြင်ကြေညာ
Lynx Technik AG®, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် software ကို-defined modular interfaces အဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်နှင့်စက်မှု signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ applications များ၏ပံ့ပိုးပေး, ဿိ Gueckel အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာထိရောက်သောဧပြီလ 1, 2018 အဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းထားပြီးကြေငြာခဲ့သည်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, Sony က Professional ကဥရောပတစ်အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်, ဿိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမီဒီယာနည်းပညာ၏လယ်ပြင်တွင် Sony က PSE အရောင်းအဘို့တာဝန်ရှိခဲ့ ...
NAB ပြရန် 2018 မှာ Ericsson ကမီဒီယာ Solutions က၎င်း၏ MediaFirst ဗီဒီယိုထုတ်ယူခြင်း suite ကိုများအတွက်ဆုသုံးခု '' Show ကိုအကောင်းဆုံး '' အနိုင်ရဖြင့်၎င်း၏ဆန်းသစ်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူတီဗီပြောင်းလဲဘယ်လိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်း၎င်း၏တီထွင်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုတွင် 'အကောင်းဆုံးအကြီးစားကျွန်း Booth' 'အဘို့အ NAB အားဖြင့်တင်ပြဆုချီးမြှင့်, (Awesome ကို Cool ပြပွဲ) တစ်ခု ACE အားအနိုင်ရသွား ...
မရတဲ့ထုတ်လုပ်မှု International (ရုံးနှင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်) - အချိန်ပြည့်
ရာထူး: မရတဲ့ထုတ်လုပ်မှု International (ရုံးနှင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်) - အချိန်ပြည့်ကုမ္ပဏီ: အချိန် Studios ကတည်နေရာတွင်: ဘရွတ်ကလင်းနယူးယော့အမေရိကန်မရတဲ့ထုတ်လုပ်မှု International: အချိန်စတူဒီယိုတွင်အွန်လိုင်းဖြန့်ဖြူးဘို့မူရင်းကြော်ငြာနှင့်ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုများဖန်တီးစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ pitching ကနေအားလုံး Post-ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုရိုက်ကူးဖို့စာရေးမှအရာခပ်သိမ်းမယ့်တဦးတည်း-stop-ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဖြစ်ပါတယ် ...
ကို Creative စာရေးဆရာ
ရာထူး: ကို Creative စာရေးဆရာကုမ္ပဏီ: Tech မှမဟိန္ဒာတည်နေရာ: Mountain View, CA ကိုအမေရိကန်ကယောဘခေါင်းစဉ်: ကို Creative စာရေးဆရာယောဘသည်တည်နေရာ: Mountain View, CA ကျနော်တို့ဘင်္ဂါလီ, တမီးနှင့်ဂုဘို့, 1 ဘာသာစကားများကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအသီးအသီး3စာရေးဆရာလိုအပ်ပါတယ်။ မူလတန်းတာဝန်များ: ကို Creative အရေးအသား, တည်းဖြတ်, နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး, အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်နှင့်ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ တစ်ဦးစတိုင်လမ်းညွှန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ အတွက် Cross-functional ဖြစ်စေကာယကံရှင်များနှင့်အတူညှိနှိုင်း ...
ရာထူး: ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးတွဲဘက်ကုမ္ပဏီ: Next ကိုအဆင့်ဗီဒီယိုတည်နေရာ: Philadelphia တွင် PA ဆိုပြီးအမေရိကန်ရာထူးခေါင်းစဉ်: ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးတွဲဘက်အရည်အချင်းများ: ရာထူး၏ Entry Level အကျဉ်းချုပ်: ရှည်လျားနာရီမကြောက်ကြောင်း Next ကိုအဆင့်ဗီဒီယိုတစ်ခက်-အလုပ်လုပ်ရှာဖွေနေသည်ဖွဲ့စည်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အားကစားထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသေးစိတ်အလုပ်။ မူလတန်းတာဝန်များ, execute ဖို့စစ်ဆင်ရေး '' လုပ်ငန်းစဉ်၏လူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ကွပ်မျက် features အသစ်တွေလည်းပါဝင် ...
ရာထူး: တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကုမ္ပဏီ: အနောက်တောင်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရှိအဆိုပါလက်ပံခရိုင်န်ထမ်းအော်ရီဂွန်ပြည်နယ် 19 Multi-ရည်ရွယ်ချက်ဆည်များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြီးကြပ်နှင့်တစ်ဦးအနည်အနှစ်များ retention ကိုဖွဲ့စည်းပုံ: အကြည်းတပ်တည်နေရာဌာန: အပြုသဘောအကြောင်းလက်ပံ OR အမေရိကန်တာဝန်အကျဉ်းချုပ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမှတဆင့်ဖက်ဒရယ်အညွှန်းလိုင်းများ၏ 720 မိုင်ထက်ပို 33 ရုပ်သံလိုင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး International ကုမ္ပဏီ: ဗီဒီယိုတည်နေရာ: ကက်စထရိုချိုင့်, CA အမေရိကန်ဒီနည်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ POSITION IS: မင်္ဂလာပါ4/ 24 / 18-6 /6/ 18 (6 အပတ်ကစာချုပ်) မှ! im ဗီဒီယိုများထူးခြားတဲ့ set ကိုအောင်နှင့်အလုပ်သင်ဆရာဝန်လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျသီချင်းဗီဒီယိုများအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျအနုပညာဖြစ်ပါသလား စိတ်ချရသော? ဇယားသင်သည်အဘယ်သို့ 3PM သို့မဟုတ် 4-2AM ထံမှ 1012 သို့မဟုတ် 9x တစ်ပါတ် (11 နာရီဆိုင်း) ဖြစ်လိမ့်မည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 10412345 » 102030...နောက်ဆုံး»